Polinezia, mihoatra ny morontsiraka mahatalanjona sy ranomasina milamina | Fitsangatsanganana tanteraka
Polynesia no anarana idiran'ny faritra goavambe eto amin'ny planetantsika Oseania. Na izany aza, amin'ny lafiny midadasika dia manomboka amin'ny Hawaii mandra-pahatongan'ny Nosy Paka. Raha fintinina dia maro ny aripelagos miely manerana ny Oseana Pasifika an'ny firenena samy hafa.
Anisan'ireo tsy miankina, misy Samoa, Tuvalu, New Zealand, Kirivati o Tonga. Ho azy ireo, misy nosy hafa Etazonia toy ny an'ny Hawaii, mba Frantsa toy ny antso Polynesia frantsay na ho United Kingdom toy ny nosy pitcairn. Saingy ireo toerana rehetra ireo dia mizara kolontsaina tranainy, sary mahafinaritra ary torapasika paradisa. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Polinezia ianao dia mamporisika anao hanohy hamaky.
1 Inona no ho hita sy atao any Polinezia
1.1 Hawaii, vavahady andrefana mankany Polinezia
1.2 Nosy Cook, fotony polineziana madio
1.3 Las Marianas, fananana Espaniola teo aloha
1.4 Kiribati, ny repoblika manomboka ny taona
1.5 Polinezia frantsay, andriamby ho an'ny fizahan-tany
1.5.1 Tahiti sy ny nosy Society
1.5.2 Ny Nosy Marquesas, ny lehibe indrindra any Polinezia frantsay
1.5.3 Nosy Paka, hamita ny fitsidihanay an'i Polinezia
Inona no ho hita sy atao any Polinezia
Tsy ho vitantsika ny hanazava aminao amin'ny lahatsoratra tokana ny zavatra rehetra azonao atao any Polinezia noho ny habe sy ny fahasamihafana misy ao aminy. Noho izany, hifantoka amin'ny toerana mahafinaritra rehetra izy ireo izay mifanaraka tsara indrindra koa mba handraisana anao amin'ny dia.
Hawaii, vavahady andrefana mankany Polinezia
Mba hilazana aminao izay rehetra atolotry Hawaii, dia mila lahatsoratra mihoatra ny iray izahay. Satria nosy sivy izy io, nosy kely ary koa atoll. Oahu Io no mipetraka ny renivohitry ny fanjakana, Honolulu, ary koa ny toerana misy ny tobin-tafika malaza any Pearl Harbor. Dia, Lohan'ny diamondra ary ny morontsiraka waikiki no toerana malaza indrindra. Fa afaka mitsidika ny endrika miavaka toa ny Saha zaridaina Ethnobotanical Amy BH Greenwell.
Amin'ny lafiny iray, Kauai, fantatra amin'ny hoe «Nosy nosy»Io no atsimo atsimo amin'ny nosy ary koa iray amin'ireo tsara tarehy indrindra. Miaraka amin'ny toetra maitso sy mirehitra, toerana toa ny Morontsiraka Na Pali, miaraka amin'ireo hantsam-bato manaitra, na ilay Waimea Grand Canyon.
ihany koa Maui Tsy maintsy jerena io any Hawaii io. Tahaka ireo teo aloha, ity nosy ity dia manolotra endrika miavaka isan-karazany. Miavaka anefa ny morontsiraka mahatalanjona. Ary, ambonin'izany rehetra izany, ny malaza lalana mankany Hana, sahabo ho zato kilometatra izay mamakivaky ny faritra avaratrandrefana, miampita riandrano, renirano, tetezana ary hantsam-bato. Ary tsy tokony halahelo ny fiposahan'ny masoandro any Maui ianao Volkano Haleakala, miaraka amin'ny feo volamena mahavariana.
Ary farany, ny nosy fahefatra izay tsy maintsy tsidihinao dia ilay antsoina hoe marina Nosy Big. Mampatsiahy anao zavatra momba an'i Lanzarote angamba izany. Satria ny Valan-javaboary Volkano, miaraka amin'ny Kilauea, Mauna Kea ary Mauna Loa, ny sasany amin'izy ireo dia mbola manala ny fikorianan'ny lava.
Nosy Cook, fotony polineziana madio
Ity nosy ity, fanjakana mifandraika amin'izany New Zealand, ahitana nosy miparitaka mihoatra ny roa tapitrisa kilometatra toradroa ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika atsimo, izay hanome anao ny hevitra momba izay rehetra hatolony.
Rarotonga trano ny renivohitra, izay ny anarany dia Avarua, ary ho hitanao ao anatiny ny rivo-piainana maoderina sy andrefana. Na izany aza, manome anao ny votoatin'ny Polynesia amin'ny toerana toa an'io Tsenan'ny Punanga Nui, izay ahitana ukuleles, sarong ary gastronomie mahazatra. Ohatra, trondro manta voahosotra na mamono ika ary ravina taro misy steamed na rukau.
Ny nosy Cook an'ny fizahantany faharoa dia Aituaki, koa iray amin'ireo tsara tarehy indrindra miaraka amin'ny lagoon anatiny voahodidin'ny haran-dranomasina sy ny torapasika paradisaacal. Atiu Izy io koa dia voahodidin'ny haran-dranomasina, saingy azonao atao ihany koa ny midina eo amboniny Zohy Anatakitaki ary mandinika vorona hafahafa.
Amin'ny lafiny iray, ny nosy muri izy io dia mety indrindra amin'ny fisitrihana scuba amin'ny faritra toa ny Black Rock na Matavera. Y Mangaia Izy io no tena mahavariana indrindra amin'ny rehetra, satria ny haoron-keviny dia vita amin'ny peratra vatohara misy ambaratonga roa izay manafina caldera volkano goavambe eo am-pototry ny Rangimotia massif.
Tora-pasika any amin'ireo nosy fahandro
Las Marianas, fananana Espaniola teo aloha
Tsy ny olon-drehetra no mahalala fa fananan'ity nosy ity España hatramin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Noho izany, manana tsy ampoizina mihoatra ny iray izy ho anao. Ohatra, izy Fiteny Chamorro, miaraka amin'ny fitoviana lehibe amin'ny Espaniola. Raha ny marina, ny anarany manokana dia "Mariano".
Ny tsara tarehy indrindra amin'ny Marianas dia mety lalana, antsoina koa "Ilay nosy milamina" ho an'ny faritaniny feno toeram-piompiana kely sy natiora. Fa malaza kokoa no Saipan, aiza ny Grotto, lavaka vatosokay anaty rano goavambe izay mahasarika ny mpitaingina eran'izao tontolo izao. Fa kosa, Tinian Manolotra anao zava-mahatalanjona voajanahary ihany koa izy io fa maro ihany koa ny fametrahana miaramila miaramila WWII.
Ny South Marianas dia manana ny halatr'izy ireo manintona ny nosy Guam. Izy io dia fonenan'ny zava-mahatalanjona toy ny tahiry voajanahary an'ny Point Ritidian, miaraka amin'ny morontsiraka mahatalanjona, ary latsaka talofofo. Tsy manadino ny cosmopolitanism an'ny Tumon Bay na ny tranombakoka misokatra mahavariana izay misy ny Valan-javaboary manan-tantara momba ny ady any Pasifika.
Ny renivohitr'i Guam dia hanambaka, izay anananao vestiges Hispanika bebe kokoa toa ny Katedraly Basilica an'ny Anaran'i Maria Mamy, izay misy, marina, eo akaikin'ny Plaza de España. Fa ny tanàna be mponina indrindra dia Dededo, miorina eo amin'ny lemaka amoron-dranomasina any avaratry ny nosy.
Kiribati, ny repoblika manomboka ny taona
Any avaratra atsinanan'ny Aostralia, dia firenena mahaleo tena misy vondron-nosy sy atoll maromaro. Anisan'ireo voalohany ny Tarawa y ny archipelagos Gilbert, Ellice, La Línea ary Fénix. Mikasika ny segondra, Kiritimati na nosy krismasy Io no toerana voalohany eto an-tany mankalaza ny taona vaovao ary toerana ivavahana marina ho an'ireo mpanarato sy mpanjono.
Kiribati dia mety ho iray amin'ireo toerana any Polinezia nitahiry indrindra ny fiainana nentindrazana. Ny mponina ao aminy dia monina ao amin'ny trano hazo indrindra ary mihinana voanio, mofo ary trondro. Afaka mahita azy ianao, indrindra raha mitsidika ireo nosy lavitra indrindra ianao.
Ny renivohitr'ity firenena mahaliana ity dia ao Tarawa atsimo, noforonina ho sandrin-tany teo anelanelan'ny Oseana Pasifika sy ny lagoon anatiny. Ny anarany dia ambo, na dia ny tanàna manan-danja indrindra aza dia Bairiki, aiza ny parlemanta.
Polinezia frantsay, andriamby ho an'ny fizahan-tany
Na eo aza ny zavatra rehetra nohazavainay taminao, angamba ny faritra amin'ity faritra malaza amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena ity dia antsoina hoe Polinezia frantsay. Izy io dia ahitana nosy valo ambin'ny folo amby zato sy atolo maromaro izay voasokajy ho vondronosy dimy. Fa hasehonay anao kosa ireo izay tena mahaliana.
Tahiti sy ny nosy Society
Tahiti dia tsy maintsy jerena raha mankany Polinezia frantsay ianao. Io no nosy lehibe indrindra amin'ny Nosy archipelago, izay mivadika ho Nosy Windward sy Sotavento. Ho an'ny voalohany, ankoatr'i Tahiti tenany, Tetiaroa o Moorea, raha toa kosa ity farany Huaine, tupai na, ny malaza indrindra amin'ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany, Bora Bora.
Ity farany ity dia be mpitsidika kokoa noho i Tahiti, ary mihemotra any amin'ny toerana fandalovana. Diso lehibe anefa izany. Manoro hevitra anao izahay handany andro vitsivitsy hahafantarana an'i Tahiti satria be ny zavatra atolotra anao.
Ny renivohiny dia Papeete, izay ahafahanao mitsidika ny katedraly ary indrindra ny tsenany. Amin'ireto farany dia liana be izy ilay manana perla. Saingy, raha te-hahatsapa ny fofonain'ny nosy ianao dia aleo mitsidika kokoa ny sakafo. Ary, raha mbola te-handoka bebe kokoa ny kolontsaina polinezianina ianao dia amporisihinay ny Museum of Tahiti sy ny nosin'ireo.
Tokony handeha hitsangatsangana amin'ny faritra afovoan'ny nosy ihany ianao, amin'izay hahitanao faritra miavaka toa ny Lohasahan'i Papenoo, izay mitondra mankany amin'ny tempolin'i Fanamoriana sarany, toerana masina ho an'ny teratany. Na ireo an'ny mount aorai, izay ahitanao ny fomba mahavariana ny nosy.
Etsy ankilany, raha tianao ny morontsiraka dia tsy maintsy mandeha any avaratra andrefana ianao, izay hitondra anao any amin'ny torapasika mahatalanjona toy ny an'ny Tautira ary, ambonin'izany rehetra izany, ny an'ny Teahupo'o, malaza amin'ny fananana iray amin'ireo onja mahatalanjona indrindra eto an-tany.
Raha liana amin'ny arkeolojia ianao dia mila mitsidika ny marae an'ny nosy. Izy ireo dia toerana masina izay nisy tamina sivilizasiôna niandohan'ny tandrefana. Mahagaga fa toy ny amin'ireo toerana ara-pivavahana tamin'ny andron'i Iron na Bronze, dia notapahana tamin'ny vato izy ireo.
Farany, any amin'ny nosy akaiky an'i Moorea Fahagagana mahafinaritra no miandry anao. Avy any Tahiti dia mora ny mandeha amin'ny sambo na fiaramanidina ary tsy azonao atao ny tsy mahita azy tendrombohitra Rotui, iray amin'ireo mahavariana indrindra amin'ny Polinesia rehetra; ny manaitra mahandro helo na ny fahitana trozona, tena fahita eny amin'ny morony.
Ny Nosy Marquesas, ny lehibe indrindra any Polinezia frantsay
Izy ireo no nosy lehibe indrindra amin'ireo rehetra mandrafitra an'i Polinezia frantsay. Mivondrona ao izy ireo Nosy Washington, ny revolisiona ary ny avy amin'i Mendaña. Ny farany dia nanome ny anarany tamin'izay nahita azy ireo tamin'ny 1595: ny Espaniola Álvaro de Mendaña, izay nanao batemy azy ireo ho Nosy Marquesas any Mendoza ho fanomezam-boninahitra ny praiminisitra però tamin'izany.
Na dia mbola tsy namanginao azy ireo aza ianao dia hahafantatra anao izy ireo satria ireny no toerana misy ny sasany Herman melville ary noho ny toeran'ny fisotroan-drononoan'ilay mpanao hosodoko Paul gaugin. Ny lehibe indrindra amin'ireo nosy ireo dia Nuku hiva, izay misy ny renivohitra, Taiohane.
Na izany aza, ny Marquesas dia tsy nahomby firy tamin'ny fizahan-tany noho ny hafa tany Polinezia. Noho io dia notehirizin'izy ireo ny ankamaroan'ny faritany virijiny mandraka androany. Mikasika ny natiora ananany dia tsy misy ifandraisany firy amin'ireo lagoons malemy miaraka amin'ny rano manga turquoise, ohatra, Bora Bora. Ny Marquesas dia tany be tendrombohitra sy mikitoantoana, misy zavamaniry maitso sy hantsam-bato amoron-tsiraka izay miafara amin'ny morontsiraka fasika mainty.
Hiva Oa, any amin'ny Nosy Marquesas
Angamba ny tsy fisian'ny fizahan-tany be dia be koa no nahatonga ny mponin'ny Marquesas hitahiry tsara kokoa ny faritanin'izy ireo noho ny faritany hafa. fomba amam-panao poloney. Izy io dia toerana mety indrindra hahitanao ny haka na dihy fombafomba ary hahafantaranao ny asa-tanany sy ny fitsidihanao ny taolam-paty arkeolojika. Mahaliana indrindra ny azy ireo tiki, sarivongana lehibe miendrika olombelona izay mety misy ifandraisany amin'ny moai avy amin'ny Nosy Paka.
Ary farany, tokony ho telo-polo kilometatra miala an'i Nuku Hiva no misy anao ny nosy Ua Pou, izay mahavariana tsanganana basaltika ny haavony lehibe manome azy lafiny iray amin'ny mistery.
Nosy Paka, hamita ny fitsidihanay an'i Polinezia
Rapa Nui na Nosy Paka angamba dia iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana malaza indrindra eto Polinezia. Noho izany, tsy misy tsara noho ny vita ny fitsidihantsika an'io faritra jeografika io any.
Very tany amin'ny Ranomasimbe Pasifika, efa ho efatra kilometatra miala ny kaontinanta amerikanina ary maro avy any Tahiti, raha zava-miafina Miteny isika, Rapa Nui manana azy rehetra. Fantatra eran'izao tontolo izao ny moai, ireo sarivongana hafahafa mamokatra lohan'olombelona.
Rehefa tonga tao amin'ity nosy very ity ny mponina fahiny ary tsy fantatra ny fomba namoronany ireo effigies lehibe ireo. Saingy fantatra fa nanao lanonana toy ny an'ny vorona-olona ary namolavola script hieroglyphic antsoina hoe rongo rongo. Tombanana ihany koa fa moai najanon'izy ireo ny fananganana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na izany aza, feno azy ireo ny nosy iray manontolo, tsy mijoro fotsiny, maro no mandry satria lavo izy ireo nony farany. Fa ny toerana tsara indrindra hahitana azy ireo dia rano raraku, Tongariki o Ahu akivi. Amin'ny farany, ny effigies dia manana ny mampiavaka azy ihany ny mijery ny ranomasina.
Moai any amin'ny Nosy Paka
Saingy tsy ireo tarehimarika ireo ihany no mahasarika ny Nosy Paka. Manoro hevitra anao koa izahay mba hahita ny vohitra fombam-pivavahana ao Orongo, izay toa, voafidy ireo mpanjaka ary manana petroglyfa hafahafa; ny sarobidy Morontsiraka Anakena ary mazava ho azy, Hanga Roa, renivohitra kely an'ny nosy, izay an fiangonana amin'ny hazo fijaliana masina afaka mahita olo-masina kristiana maromaro ianao saingy voasokitra amin'ny fomban'izy ireo manokana moai.
Ho famaranana, eto am-pamaranana ny dia natolotray taminao izahay ny Pôlinezia. Notantarainay anao ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra ao aminy. Saingy azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanao ny dia ataonao any amin'ny hafa toa ilay Fanjakan'i Tonga, izay ahitanao ny trilito an'i Ha'amonga'a, fantatra amin'ny hoe "Ny Stonehenge of Polynesia"; Tuvalu, izay ananan'izy ireo ny fanatanjahantena manokana, ny Maniry mafy anao aho, na ireo malaza Nosy Fiji. Samy tsy handiso fanantenana anao ireo toerana roa ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Pôlinezia
Tany efitra Tabernas